Akụkọ - nkwalite na atụmanya nke ụlọ ọrụ anyị na 2021
N’afọ 2021, ọnụ ahịa ịnyịnya eletrik gbalitere opekata mpe atọ. Nke ahụ bụ bcz nke ọnụahịa nchara etolitere yana ihe ndị ọzọ. Ahịa anaghị akwụsi ike yana kwa ọnọdụ ụgbọ mmiri. Nke anyịTianjin Shengtai International Trade Co., Ltd. na -a attentiona ntị mgbe niile na usoro ahịa, na -ejikwa njikwa ngwaahịa nke ọma ọ naghị akpaghasị usoro ahịa mba ụwa. Jikwaa ọnụ ahịa ihe n'echiche nke idobe ịdị mma. Yabụ na enweghị ike ahịa nke afọ a enwebeghị mmetụta dị ukwuu n'ahụ anyị.
Mmepe na atụmanya
N'afọ 2021, ngwaahịa anyị ka bụ igwe kwụ otu ebe ugwu, igwe kwụ otu ebe eletrik, skuuta eletriki na moto eletriki. N'afọ a, anyị lekwasịrị anya ike anyị niile na mmepe na ịre igwe kwụ otu ebe igwe eletrik. ngwaahịa ọ bụla, ebe ị na -ebelata ego, iji nye ndị ahịa ọrụ ka mma.
N'afọ gara aga, ahịa igwe kwụ otu ebe ugwu dị oke ọkụ n'ụwa niile. Ahịa mba ụwa fọrọ nke nta ka o jupụta n'oge a. Yabụ na anyị kwesịrị ịchọta ebe azụmaahịa ọhụrụ. Ọ bụ ya mere anyị ji malite mmepe igwe kwụ otu ebe eletrik. Nke a kwesịrị ịbụ ebe ahịa na -abịa n'ọdịnihu.
Ọkụ eletrik igwe kwụ otu ebe na -egbo mkpa nke ndị na -eji igwe kwụ otu ebe ugwu na ọkụ eletrik igwe kwụ otu ebe ndị ọrụ. Nke a bụ ikuku ọhụrụ - njem akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ọ bụ ngwakọta teknụzụ na egwuregwu. Igwe eletriki igwe eletrik nwere ọtụtụ ihe eji eme ihe. Enwere ike iji ya maka ntụrụndụ, mmega ahụ na njem.
Anyị azụlitela igwe eletriki igwe eletriki abụba, mpịachi igwe eletrik igwe kwụ otu ebe, mpịachi abụba taya igwe eletriki igwe eletriki igwe, ihe enyemaka ihe mmetụta ọkụ igwe kwụ otu ebe. Dị ka ọ na -adị, anyị na -ahọrọ moto azụ azụ, mana n'oge a, a na -emepụtakwa anyị n'etiti moto. Dịka ọmụmaatụ igwe eletrik na -ejegharị ejegharị na ụfọdụ igwe eletrik pụrụ iche.
Oge ezipụ: Sep-06-2021